Jim M. Tobin - Sinnaanta Helitaanka Caalamiga ah
Jim Tobin wuxuu ahaa Guddoomiyaha Guddiga Agaasimayaasha EAI illaa 2006, iyo xubin ka tirsan Guddiga illaa 2013. Wuxuu kaloo u shaqeeyaa Guddiyada Fulinta iyo Maaliyadda ee Guddiga.
Kahor intuusan ku biirin guddiga EAI, Mr. Tobin wuxuu iskaashi lalahaa Morrison & Foerster, wuxuu madax u ahaa kooxdeeda San Francisco Communications Practice Group, iyo wuxuu kaloo ahaa Co-Chair oo ka tirsan kooxdeeda Tababareed ee Isgaarsiinta. Shaqadiisu waxay diiradda saareysay dhinacyada ganacsiga iyo sharciyeynta ee isgaarsiinta, taleefannada gacanta, iyo warshadaha internetka, macaamillada tikniyoolajiyadeed ee gudaha iyo kuwa caalamiga ah, iyo dacwadaha sharciyeynta ah ee hor yaalla FCC, Guddiga Adeegyada Dadweynaha ee California, iyo maxkamadaha federaalka.
Mr. Tobin wuxuu u shaqeeyay Madaxweyne kuxigeenka, Xeerka Xeerka iyo Madaxweyne kuxigeenka iyo lataliyaha guud ee laba shirkadood isgaarsiin, iyo sidoo kale Maareye xubin ka ah shirkad dhistay, shaqeysay, kana iibisay nidaamka fiber-ka "fiber guriga" kobciyaha weyn.
Mr. Tobin wuxuu ka qaatay BA, sharaf sharaf Jaamacadda California - Riverside, JD-na wuxuu ka qaatay Jaamacadda Georgetown. Wuxuu xubin ka yahay Barta Kalifoorniya wuxuuna ka qayb qaataa tiknoolajiyada iyo ururada warshadaha isgaarsiinta.